समाचार - किन किन्डरगार्टनहरूले पनि ढु plastic्गाको प्लास्टिक फ्लोरिंग छनौट गर्छन्
किन किंडरगार्टनहरूले पनि ढु stone्गाको प्लास्टिकको फर्नि choose छनौट गर्दछन्
भर्खरका वर्षहरूमा, किंडरगार्टन्समा ढु stone्गाको प्लास्टिक कम्पोजिट फ्लोरिंगको प्रयोग अधिक र अधिक व्यापक हुँदै गयो, र धेरै बालवाडीहरूले सामान्यतया एसपीसी फ्लोर राख्नको लागि छनौट गर्न सक्दछन्। भुई एक प्रकारको पाना हो जब द्वारा उत्पादन गरिन्छएसपीसी फ्लोरिंग उत्पादन लाइन। संरचनाबाट, यो मुख्यतया एकल कोर पाना, बहुपरत कम्पोजिट पाना, र अर्ध-समरूप मूल पानामा विभाजित हुन्छ; आकारबाट, यो वर्ग सामग्री र स्ट्रिप सामग्रीमा विभाजित हुन्छ। कोएसपीसी फ्लोर मेकिंग मेसिन जुन दिनदेखि यो जन्म भएको थियो, यसले मानव जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। स्टोन प्लास्टिक कम्पोजिट फ्लोरलाई स्टोन प्लास्टिक फ्लोर टाइल पनि भनिन्छ। औपचारिक नाम "PVC विनाइल फ्लोर" हुनुपर्दछ। यो एक नयाँ प्रकारको फ्लोर सजावट सामग्री हो जुन उच्च-गुणवत्ता र उच्च-टेक अनुसन्धान र विकास द्वारा विकसित गरिएको हो। यसले उच्च-घनत्व र उच्च घनत्व फ्लोर बनाउनको लागि प्राकृतिक मार्बल पाउडर प्रयोग गर्दछ। फाइबर नेटवर्क संरचनाको ठोस आधार तह, सतह एक सुपर पोशाक-प्रतिरोधी पॉलिमर PVC पोशाक-प्रतिरोधी तहले कभर गरिएको छ, जुन सयौं प्रक्रियाहरू मार्फत प्रशोधन गरिन्छ।
किंडरगार्टन एसपीसी फ्लोर एक प्रकारको एसपीसी फ्लोर हो, जुन किंडरगार्टनका लागि विशेष रूपमा किन्डरगार्टनको विशेषताहरु अनुसार डिजाइन गरिएको हो। किन्डरगार्टन एसपीसी फ्लोरमा फाइदाहरूको एक श्रृंखला छ, यो उपस्थिति देखि मानिसहरूले यसलाई प्रशंसा गरिएको छ। वर्तमानमा धेरै बालवाडीहरूले यस प्रकारको बालवाडीको एसपीसी भुइँ राखेका छन्। विशेषताहरूको विशिष्ट विश्लेषण निम्न सामग्रीमा प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ:
सर्वप्रथम यसले बच्चाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। एसपीसी फ्लोरमा कोमलता र लोचको विशेषताहरू छन्, जसले बच्चाको पतन हुँदा तिनीहरूको हानी कम गर्न सक्छ। किनभने बच्चाहरू स्वाभाविक रूपमा सक्रिय छन्, अलिक लापरवाही पतन र हानि निम्त्याउँदछ, बच्चाहरूलाई मात्र होइन, बालगृह बाल्टिनको प्रतिष्ठामा पनि। किंडरगार्टन्समा ढु stone्गाको प्लास्टिक कम्पोजिट फ्लोरको उपस्थितिले यस प्रकारको क्षतिले ठूलो क्षति कम गर्दछ, त्यसैले यसलाई किंडरगार्टनले स्वागत गर्दछ।
दोस्रो, बालवाडीको एसपीसी भुँइ सफा र मर्मतसम्भार सरल छ। किनभने बच्चाहरू भुइँमा फोहोर हुन्छन्, बालवाडिको भुइँ सफा गर्नु सधैं गाह्रो काम हो। एसपीसी भुँडी फुट्ने सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन फ्ल्याशिंग पानीले सफा गर्न सकिन्छ, र सफा गर्ने एजेन्टको उचित मात्रा पानीमा थपिन्छ।
तेस्रो, किन्डरगार्टन एसपीसी फ्लोरमा लामो जीवनको विशेषताहरू छन्। साधारण ठाउँ कडा छ, बच्चाहरूको विकासमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सजिलो छ, र यो धेरै टिकाऊ छैन, र क्र्याकजस्ता समस्याहरू उत्पन्न गर्न सजिलो छ। यसको विपरित, किंडरगार्टन ढु stone्गाको प्लास्टिक फ्लोरले हाम्रो पूर्वाधारको सेवा जीवन धेरै लामो पार्दछ।
KEPT INDUSTRY उत्कृष्ट एसपीसी फ्लोरिंग उत्पादन लाइन आपूर्ति गर्दछ, हामी राम्रो अनुभवको साथ पेशेवर छौं! हाम्रो बिक्री टीम संग छानबिन गर्न स्वागत छ!
पोष्ट समय: २०२१-०२-२।